ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ဖြေဆိုကြမည့် သူများတွက် နှစ် ခါပြန်မဖြစ်ရအောင် ဒီ စာလေး ကိုဖတ်ပါ – Shwewiki.com
ယာ ဉ်မောင်းလိုင်စင်သွားရောက်ဖြေဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပေးပါတယ်။အလုပ်တဖက် ကျောင်းတဖက် ကားကပိတ်နေပူဖုန်ထူကြားနှစ်ခါပြန်မဖြစ်ရအောင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီး အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ#
၂။ ရက်ချိန်းပေးတဲ့နေ့ မှာ မိမိဖြေရမဲ့အချိန်ထက် မြင်သာလိုင်စင်ရုံး လေးထပ်အဆောင်အစိမ်းဆီကို တစ်နာရီလောက်စောရောက်နေဖို့လိုပါတယ်။
၃။ ဘာတွေယူသွားရမလဲဆိုရင် online booking ကပြန်ကျလာတဲ့စာကို print ထုတ်ပါ(သို့) ရက်ချိန်းပြန်ကျတဲ့ ဖုန်းထဲမှအထောက်ထားကို ပြပါ၊ သက်တမ်းရှိသင်မောင်းလိုင်စင်မူရင်း၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်မူရင်း မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ ၊ ခဲတံ တစ်ချောင်းပါယူသွားပါ။မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား
၄။ ဘာစာတွေကျက်မှတ်ထားရမလဲဆိုရင် ကညန ကတရားဝင်ပေးထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းရေးဖြေ စာအုပ်ကိုသာ အသေချာလေ့လာဖတ်ရူထားပါ။ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ဖြေနိုင်ပါတယ် ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးမူအတွက်ကတော့ ကျက်ထားဖို့မလိုပါဖူး ဖြေရင်ကိုအအောင်ပေးပါတယ် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကိုသာအသေချာဖတ်ရူလေ့လာထားပါ။
၅။ ရေးဖြေ ဖြေဆိုဖို့ အခန်းထဲရောက်ပြီဆိုလျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခ ငါးရာပေးသွင်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပါ့မယ် မျက်စိ စစ်ဆေးပြီး အောင်ရင် အခန်းထဲဝင်ပြီးရေးဖြေဖြေဆိုရမှာပါ မဖြေခင် တာဝန်ရှိသူတွေက
သေချာဖြေဆိုရမဲ့ပုံစံကို အသေချာ ပြောပြပေးမှာပါ ခဲခြစ်ဖြေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုက်ကိုမေးခွန်းကိုအရင်ဖြေပြီးရင် လမ်းစည်းကမ်းယာဉ်စည်းကမ်းကိုဖြေဆိုရမှာပါ ခဲခြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အမှတ်၅၀ဖိုးမေး၄၀ရရင်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ အဲယားကွန်းခန်းထဲ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဖြေဆိုရမှာပါ စာဖတ်ထားတယ်ဆိူရင် ရေးဖြေကအောင်ပါတယ်။
၆။ ရေးဖြေအောင်ပြီဆိုရင် နေ့ခင်း၁၂:၀၀မှာပြီးရင် ရွာသာကြီးမှာ အမောင်းဖြေမှီပါတယ် ရောက်ပြီဆို ငွေခန်းမှာတန်းစီပြီး ရေးဖြေအောင်စာရွက်ပြပြီး ငွေသွင်းရမှာပါ ကိုယ်ပိုင်ကားဆို၅၀၀ပဲသွင်းရပြီး ကညန ကားနဲ့ဖြေမယ်ဆို၃၅၀၀ပေးသွင်းရပါတယ်။
၈။ နာမည်ခေါ်လို့ ပတ်မောင်းစမောင်းပြီဆိုရင် ခါးပတ်ပတ်ပါ အချက်ပြဖို့မမေ့ပါနဲ့ ဟောက်စားလုပ်သူများလဲ ရှိပါသောကြောင့်သီးခံစိတ်မွေးပါ ပတ်မောင်းကမခက်လို့အောင်ပါတယ်။
၉။ခက်ခဲမူကတော့ပါကင်ထိုးရတာပါပဲ မလွယ်ပါဖူး ၁၀ယောက်ဖြေရယောက်ကျပါတယ် အပြင်မှာဘလိုပဲကျွမ်းကျင်နေပါစေ ပါကင်ဖြေရရင် နတ်ကြီးပါတယ်အကြံပေးချင်တာကတော့ စတီယာတိုင်အဆုံးမချိုးပါနဲ့ ညာဘက်စည်းကိုသတိပြုပါ အရှေ့စည်းကိုမကျော်ပါစေနဲ့ အော်တိုဂီယာကားတွေချည်းပါပဲ။လွယ်မလိုနဲ့ခက်တိမ်မလိုနဲ့ နက်ပါတယ် အဆိုပါအဆင့်မှာအောင်မြင်သွားရင်တော့
Congratulations ပါပဲ လိုင်စင်ရဖို့သေချာသွားပါပြီ။အာမခံ ငွေသွင်းပြီးထိုင်စောင့် ရင်လိုင်စင် smart card ထွက်ပါပြီ။ကျသွားရင်တော့နောက်တရက်ငွေထပ်သွင်းပြန်လာဖြေလို့ရပါတယ်။
သတိပေးချင်တာကတော့ ဘယ်ပွဲစားမှမအပ်ပဲ ကိုယ်ဘာကိုယ်လုပ်ဆောင်ပါ ပွဲစားကလဲ ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဖူး ဘာတာဝန်မှလဲယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဖူး ကိုယ်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်က တသောင်းကျော်ပဲကျသင့်ပါတယ် အားလုံးအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းလို့ အောင် မြင် ကြ ပါ စေ ။
ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ဖွဆေိုကွမညျ့သူမြားတှကျ နှဈခါပွနျမဖွဈရအောငျ ဒီစာလေးကိုဖတျပါ
ယာဉျမောငျးလိုငျစငျသှားရောကျဖွဖေို့လိုအပျခကျြတှကေိုအသေးစိတျရှငျးပွထားပေးပါတယျ။အလုပျတဖကျ ကြောငျးတဖကျ ကားကပိတျနပေူဖုနျထူကွားနှဈခါပွနျမဖွဈရအောငျ ဒီစာလေးကိုဖတျပွီး အောငျမွငျနိုငျကွပါစေ#
၃။ ဘာတှယေူသှားရမလဲဆိုရငျ online booking ကပွနျကလြာတဲ့စာကို print ထုတျပါ(သို့) ရကျခြိနျးပွနျကတြဲ့ ဖုနျးထဲမှအထောကျထားကို ပွပါ၊ သကျတမျးရှိသငျမောငျးလိုငျစငျမူရငျး၊ သငျတနျးဆငျးလကျမှတျမူရငျး မိတ်တူ၊ မှတျပုံတငျမူရငျး မိတ်တူ ၊ ခဲတံ တဈခြောငျးပါယူသှားပါ။မိတျဆှေ အခုလိုနညျးပညာတှေ တိုးတကျနတေဲ့ခတျေကွီးမှာ အရငျလို ၂လုံး၃လုံးထိုးနတေုနျးဘဲလား? အဆငျမပွရေငျ ဒီ app လေးပွောငျးသုံးကွညျ့ပါလား
၄။ ဘာစာတှကေကျြမှတျထားရမလဲဆိုရငျ ကညန ကတရားဝငျပေးထားတဲ့ ယာဉျမောငျးရေးဖွေ စာအုပျကိုသာ အသခြောလလေ့ာဖတျရူထားပါ။ဘလိုဖွဈဖွဈဖွနေိုငျပါတယျ ဆိုကျကိုစဈဆေးမူအတှကျကတော့ ကကျြထားဖို့မလိုပါဖူး ဖွရေငျကိုအအောငျပေးပါတယျ ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးကိုသာအသခြောဖတျရူလလေ့ာထားပါ။
၅။ ရေးဖွေ ဖွဆေိုဖို့ အခနျးထဲရောကျပွီဆိုလြှငျ ဓာတျပုံရိုကျခ ငါးရာပေးသှငျးပွီးဓာတျပုံရိုကျပါ့မယျ မကျြစိ စဈဆေးပွီး အောငျရငျ အခနျးထဲဝငျပွီးရေးဖွဖွေဆေိုရမှာပါ မဖွခေငျ တာဝနျရှိသူတှကေ
သခြောဖွဆေိုရမဲ့ပုံစံကို အသခြော ပွောပွပေးမှာပါ ခဲခွဈဖွဆေိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖွဆေိုရမှာဖွဈပါတယျ။ဆိုကျကိုမေးခှနျးကိုအရငျဖွပွေီးရငျ လမျးစညျးကမျးယာဉျစညျးကမျးကိုဖွဆေိုရမှာပါ ခဲခွဈတဲ့နညျးနဲ့ဖွေ
ဆိုရမှာဖွဈပွီး အမှတျ၅၀ဖိုးမေး၄၀ရရငျအောငျမွငျမှာဖွဈပါတယျ။စိတျမပူပါနဲ့ အဲယားကှနျးခနျးထဲ ခေါငျးအေးအေးနဲ့ ဖွဆေိုရမှာပါ စာဖတျထားတယျဆိူရငျ ရေးဖွကေအောငျပါတယျ။
၉။ခကျခဲမူကတော့ပါကငျထိုးရတာပါပဲ မလှယျပါဖူး ၁၀ယောကျဖွရေယောကျကပြါတယျ အပွငျမှာဘလိုပဲကြှမျးကငျြနပေါစေ ပါကငျဖွရေရငျ နတျကွီးပါတယျအကွံပေးခငျြတာကတော့ စတီယာတိုငျအဆုံးမခြိုးပါနဲ့ ညာဘကျစညျးကိုသတိပွုပါ အရှစေ့ညျးကိုမကြျောပါစနေဲ့ အျောတိုဂီယာကားတှခေညျြးပါပဲ။လှယျမလိုနဲ့ခကျတိမျမလိုနဲ့ နကျပါတယျ အဆိုပါအဆငျ့မှာအောငျမွငျသှားရငျတော့ Congratulations ပါပဲ လိုငျစငျရဖို့သခြောသှားပါပွီ။အာမခံ ငှသှေငျးပွီးထိုငျစောငျ့ ရငျလိုငျစငျ smart card ထှကျပါပွီ။ကသြှားရငျတော့နောကျတရကျငှထေပျသှငျးပွနျလာဖွလေို့ရပါတယျ။
သတိပေးခငျြတာကတော့ ဘယျပှဲစားမှမအပျပဲ ကိုယျဘာကိုယျလုပျဆောငျပါ ပှဲစားကလဲ ဘာမှလုပျပေးလို့မရပါဖူး ဘာတာဝနျမှလဲယူနိုငျမှာမဟုတျပါဖူး ကိုယျပျေါပဲမူတညျပါတယျ။ကုနျကစြရိတျက တသောငျးကြျောပဲကသြငျ့ပါတယျ အားလုံးအန်တရာယျကငျးဘေးရှငျးလို့ အောငျ မွငျ ကွ ပါ စေ ။